Rugby – «Can 1B» : vonona ary miandry ny mpijery ny Makis Junior (NewsMada) | AEMW
Rugby – «Can 1B» : vonona ary miandry ny mpijery ny Makis Junior (NewsMada)
J-7 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, sokajy “junior” taranja rugby, isika anio. Efa milamina ny fampiantranoana sy ny fandraisana ny fihaonana. Ho avy ny Ogande, hifampitana amin’ny Malagasy.
Hiady ny toerana hiakarana amin’ny sokajy 1A, “junior” eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja rugby ny Makis de Madagascar. Ogandà no hifanandrina amin’ny Malagasy amin’izany. Fihaonana mandroso sy miverina izay samy atao etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina avokoa. Lalao mandroso, ny alakamisy 25 aogositra ary ny alahady 28 aogositra ny miverina.
Vonona hiatrika izany izy 25 mirahalahy izay efa niomana hatramin’ny volana may lasa teo. Ny talata ho avy izao kosa no ho tonga, ry zareo Ogande.
Nambaran’i Solofoson Bien-Aimé, filoha lefitry ny malagasy Rugby fa miavaka ity ekipam-pirenena indray mitoraka ity, izay manana ny vatana lehibe sy ny fahaiza-manao rehetra.
Na izany aza, ambony eo amin’ny filaharana ry zareo Ogande, izay tao amin’ny sokajy 1A, nivarina 1B. Raha tsiahivina, ny taona 2013 no tao anaty sokajy 1A ny Makis de Madagascar.
Nambaran’ny tomponandraikitry ny malagasy Rugby fa mpitsara malagasy avokoa no hitantana ny lalao ny andron’ny alakamisy, tarihin-dRakotonirainy Stéphane ary Kenyanina, kosa ny hitsara ny fihaonana ny alahady ary Malagasy ireo mpitsara anjorony.
Ankoatra izay, mba hahazoan’ny rehetra mijery baolina sy hanohana ny Makis de Madagascar, noferana ho 2000 Ar ny vidim-pidirana amin’ireo lalao roa ireo.
Tsiahivina fa hiara-dalana amin’ity lalaon’ny Makis sy Oganda ity ny fihaonana eo amin’i Maraoka sy Sénégal, hatao any Casablanca. Araka izany, miakatra ao amin’ny vondrona 1A, amin’ny taona ho avy, izay firenena be isa indrindra amin’ireo firenena efatra ireo.
← Kitra lehilahy – «Lalao Olympika 2016» : hiady volamena i Brezila sy i Alemaina (NewsMada)
Mitsangana ry malagasy : « Nous sommes tous Soamahamanina » (NewsMada) →